အတင်းအကျပ်ဝယ်ယူသောအပြုအမူ - အခြားအပြုအမူစွဲလမ်းမှုနှင့်အတူဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှိုင်းယှဉ်ခြင်း - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိသင်၏ ဦး နှောက်
တပ်ဦး Psychol။ 2016; 7: 914 ။
2016 ဇွန် 15 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.3389 / fpsyg.2016.00914
Roser Granero,1,2 ဖာနန်ဒို Fernandez-Aranda,1,3,4 ကျောက်မျက်ရတနာ Mestre-Bach,3 Trevor ဘဏ္ewာစိုး,1,3 Marta Baño,1,3 Amparo del Pino-Gutierrez,5 လော်ရာ Moragas,3 NúriaMallorquí-Bagué,1,3 Neus Aymamí,3 မော်နီကာဂိုမက်ဇ-Pena,3 SaloméTárrega,2 ဟိုဆေးအမ်Menchón,3,4,6 နှင့် စူစန်နာ Jimenez-Murcia1,3,4,*
ဝယ်ယူသောဝယ်ယူခြင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (CBB) ကိုစိတ်ကျန်းမာရေးရောဂါအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးခွဲခြားစနစ်များကိုခွဲခြားခြင်းမပြုရသေးပါ။ ဒီလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအခြားအမူအကျင့်စွဲနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် CBB phenotype နှင့်ဆက်စပ်သော sociodemographic နှင့်ဆေးခန်း variable တွေကိုအကဲဖြတ်ရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သုံးထောင်သုံးရာနှစ်ဆယ့်လေးယောက်အားကုသမှုခံယူသောလူနာများကို CBB၊ CBB၊ လိင်စွဲလမ်းမှု၊ အင်တာနက်ဂိမ်းကစားခြင်း၊ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနှင့်လောင်းကစားရောဂါများကိုအုပ်စု ၅ ခုခွဲခြားထားသည်။ CBB သည်အမျိုးသမီးများ၏မြင့်မားသောအချိုးအစား၊ စိတ်ပညာဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်ခြင်းနှင့်အသစ်သောရှာဖွေခြင်း၊ ထိခိုက်ခြင်းမှရှောင်ရှားခြင်း၊ ဆုလာဘ်အားမှီခိုမှု၊ ဇွဲရှိခြင်းနှင့်အခြားသောအပြုအမူဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများ၏ပူးပေါင်းမှုစသည်တို့အားဖြင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များပိုမိုမြင့်မားသည်။ ရလဒ်များအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောအမူအကျင့်စွဲအမျိုးအစားခွဲခြားထားသည့်လူနာများ၏လက်တွေ့အချက်များတွင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောခြင်းကိုဖော်ပြထားပြီး CBB ၏အဓိကယန္တရားများအပေါ်အလင်းအသစ်ထုတ်ပေးသည်။
keywords: အကျင့်စရိုက်စွဲခြင်းများ၊ ၀ ယ်ယူသောအပြုအမူများ၊ လောင်းကစားခြင်း၊ အင်တာနက်ဂိမ်းကစားခြင်း၊ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု၊ လိင်စွဲလမ်းမှု
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ လူမှုရေး၊ အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ၊ ဘဏ္financialာရေးအခြေအနေများရှိသော်ငြားကုန်ပစ္စည်းများကို ၀ ယ်လိုအား၊ ၀ ယ်လိုအား၊ ၀ ယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဝယ်ယူခြင်းနှင့်ဆိုင်သောဝယ်ယူခြင်းဆိုင်ရာပြotherwiseနာဟုသိကြသောဝယ်ယူမှုဆိုင်ရာအမူအကျင့် (CBB) သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအခြေအနေဖြစ်သည်။ အကျိုးဆက်များ (Müller et al ။ , 2015b) ။ သာမန်မဟုတ်သောစားသုံးသူများသည်စျေးဝယ်ခြင်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်အနေဖြင့်တန်ဖိုးနှင့်အသုံး ၀ င်မှုကိုဖော်ပြကြသော်လည်းအတင်းအကျပ် ၀ ယ်ယူသူများသည်သူတို့၏စိတ်အခြေအနေကိုတိုးတက်စေရန်၊ စိတ်ဖိစီးမှုများကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရန်၊ လူမှုခွင့်ပြုချက် / အသိအမှတ်ပြုမှုရရှိရန်နှင့်သူတို့၏ပုံရိပ်ကိုတိုးတက်စေရန်အလို့ငှာ ၀ ယ်ယူမှုများပြုလုပ်ကြသည် (Lejoyeux နှင့် Weinstein, 2010; Karim နှင့် Chaudhri, 2012; McQueen et al ။ , 2014; ရောဘတ် et al ။ , 2014) ။ ရှည်လျားသော CBB ၏နောက်ဆက်တွဲတွင် ၀ ယ်ယူမှုများ၊ အရှက်ရခြင်း၊ အပြစ်ရှိခြင်း၊ ဥပဒေရေးရာနှင့်ဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာပြproblemsနာများနှင့် ၀ န်ထမ်းများအကြားအခက်အခဲများနှင့် ပတ်သက်၍ နောင်တ / နောင်တရခြင်းခံစားချက်များပါ ၀ င်သော်လည်း CBB ရှိသူများသည်အတင်းအကျပ်ဝယ်ယူခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်သူတို့၏ကြိုးပမ်းမှုများတွင်ပျက်ကွက်ခဲ့ကြသည် (Konkolý Thege et al ။ , 2015).
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအတွင်း CBB ၏ကြိမ်နှုန်းတိုးပွားလာခဲ့သည်။ မကြာသေးမီက meta-analysis သည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကိုယ်စားလှယ်နမူနာများ၌ CBB အတွက်စုစုပေါင်း ၄.၉% ရှိသည်ဟုခန့်မှန်းခဲ့သည်။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ၊ ရပ်ရွာအခြေပြုမဟုတ်သူများနှင့်စျေး ၀ ယ်ခြင်းကိုအထူးပြုပါ ၀ င်သူများအတွက်အချိုးအစားပိုမိုများပြားသည် (Maraz et al ။ , 2015) ။ သို့ရာတွင်ရောဂါပျံ့နှံ့မှုဆိုင်ရာသုတေသနတွင်ပျံ့နှံ့မှုခန့်မှန်းချက်များသည်ကွဲပြားခြားနားပြီးနမူနာအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ၁ မှ ၃၀% အထိရှိသည် (Basu et al ။ , 2011).
CBB ၏ပျံ့နှံ့မှုအားခန့်မှန်းရန်အဓိကအခက်အခဲတစ်ခုမှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခွဲခြားခြင်းစနစ်တွင်ဤစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းသည် ဆက်လက်၍ အငြင်းအခုန်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ“ စွဲလမ်းမှု” ဟူသောသဘောတရားသည်စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါနှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်၏ပဉ္စမထုတ်ဝေမှု (DSM-5; American Psychiatric Association) ၏ပြင်ဆင်မှုတွင်အငြင်းပွားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ 2013; Piquet-Pessôa et al ။ , 2014) ။ လောလောဆယ် CBB အတွက်ရရှိနိုင်သောလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာအဓိပ္ပာယ်များသည်ထကြွလွယ်သောထိန်းချုပ်မှုရောင်စဉ်ရှိရောဂါများနှင့်တူညီမှုအပေါ်တွင်မှီတည်နေသည် (Potenza, 2014; Robbins နှင့် Clark က 2015) အဓိကအားဖြင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်ဆက်စပ်သည် (Grant et al ။ , 2013), obsessive-compulsive ရောဂါ (Weinstein et al ။ , 2015), အစာစားခြင်းမမှန်မှုများ (Fernández-Aranda et al ။ , 2006, 2008; Jiménez-Murcia et al ။ , 2015) နှင့်ထိုကဲ့သို့သောလောင်းကစားရောဂါကဲ့သို့သောအခြားအပြုအမူစွဲ (Black et al ။ , 2010), အင်တာနက်ဂိမ်းကစားခြင်းရောဂါ (IGD) နှင့်အင်တာနက်စွဲ (Suissa, 2015; Trotzke et al ။ , 2015), နှင့်လိင်စွဲ (Derbyshire နှင့် Grant က, 2015; Farré et al ။ , 2015).
CBB ၏တိကျသော etiology ကိုမသိရှိရသေးပါ။ ကွဲပြားခြားနားသောအချက်များဖြစ်နိုင်ခြေပံ့ပိုးအဖြစ်အဆိုပြုထားခြင်းနှင့်ယနေ့အထိကောက်ယူ CBB လေ့လာမှုများအများအားဖြင့်မျိုးရိုးဗီဇအချက်များနှင့် CBB မရှိခြင်းဖြစ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ သုတေသနနှင့်အတူ neurobiological အချက်များအပေါ်ဗဟိုပြုခဲ့ကြသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုပြdisနာများကဲ့သို့ပင် CBB နှင့်အခြားအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းသူများနှင့်အတူလူများ၏ ဦး နှောက်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများသည် frontoparietal ဒေသများတွင်ပုံမှန်မဟုတ်သောအရာများ၊ ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနှင့် limbic စနစ်များကိုတသမတ်တည်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ (Raab et al ။ , 2011; Baik, 2013; Leeman နှင့် Potenza, 2013; Probst နှင့်ဗင် Eimeren, 2013; ဗန်ဒါရာနှင့် Sandweiss၊ 2015) ။ သို့သော်လက်ရှိရရှိနိုင်သည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာအထောက်အထားများအရခိုင်မာသောအာရုံကြောယန္တရားများနှင့်သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များသည်ပုံမှန်စျေး ၀ ယ်သည့်အပြုအမူကိုမူးယစ်ဆေးဝါးနှိုးဆွမှုမရှိခြင်းတွင်စွဲလမ်းစေနိုင်ကြောင်းကိုအပြည့်အဝရှင်းပြထားခြင်းမရှိပါ။ 2014; အိန်ဂျယ်လ်နှင့်ကာစီဒာ 2015) ။ အခြားစွဲလမ်းစေသောအခြေအနေများနှင့်မတူဘဲ CBB ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်စျေးကွက်စီးပွားရေး၊ ရရှိနိုင်သည့်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး၊ တစ်ခါတစ်ရံ ၀ င်ငွေနှင့်ရုပ်ပစ္စည်းတန်ဖိုးများစသည့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာယန္တရားများ၏တည်ရှိမှုအပေါ်တွင်မူတည်သည်ဟုဖော်ပြထားသည် (Unger et al ။ , 2014).
CBB phenotype နှင့်စပ်လျဉ်း။ သုတေသနလေ့လာမှုများကအခြားအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများနှင့်အတူဘုံလက္ခဏာများကိုမျှဝေခြင်းကိုမီးမောင်းထိုးပြသည် (El-Guebaly et al ။ , 2012; Choi et al ။ , 2014; Grant နှင့် Chamberlain, 2014; di Nicola et al ။ , 2015) ။ အခြားအပြုအမူစွဲလမ်းစေသောရောဂါများကိုအသုံးချသည့် Gray's Reinforcement Sensitivity Theory, မြင့်မားသောအမူအကျင့်ဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုစနစ် (BAS) သည်တစ် ဦး ချင်းစီကိုအလိုလိုက်သောအပြုအမူများတွင်ပါ ၀ င်ရန် predispose (Franken et al ။ , 2006) ။ CBB ၏အခြေခံစွဲလမ်းစေသောလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလည်းရှင်းပြရန်အသုံးပြုသည်။ အားဖြည့်ခြင်း - အပြစ်ပေးခြင်းစနစ်နှစ်ခုလုံးသည်ဤရောဂါစတင်ခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးခြင်းတွင်ပါ ၀ င်ပုံရသည် (Davenport et al ။ , 2012) ။ လက်တွေ့နမူနာများတွင်ဖြစ်သော်လည်းဤရောဂါနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာတက်ကြွမှုအဆင့်များအကြားပိုမိုကြီးမားသောဆက်နွယ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် (Claes et al ။ , 2010; Muller et al ။ , 2014) ။ ထို့အပြင်အလုပ်မဖြစ်သောစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများကိုအထူးသဖြင့်စွဲလမ်းမှုနှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများကိုကိုင်တွယ်ခြင်းကဲ့သို့သောအပြုအမူဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှု၏ထူးခြားသောလက္ခဏာများတွင်လည်းဆိုလိုနေပုံရသည် (Kellett et al ။ , 2009; Williams နှင့် Grisham, 2012).
အစောပိုင်းပြသနာများသောအပြုအမူများကိုဤစွဲလမ်းစေသောလုပ်ဆောင်မှုများ၏ဘုံသွင်ပြင်လက္ခဏာအဖြစ်လည်းသတ်မှတ်ထားသည်။ epidemiological research သည်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများသည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှောင်းပိုင်းတွင်ပြproblemနာဖြစ်လာလေ့ရှိသည် (Balogh et al ။ , 2013; Maraz et al ။ , 2015) ။ ဤဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်တွင်စိတ်လိုက်မာန်ပါလုပ်ခြင်းနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောအပြုအမူများကိုရွယ်တူချင်းများမှလူမှုရေးအရသည်းခံနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်မြှင့်တင်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီး၎င်းသည်စွဲလမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေမည့်အလားအလာရှိသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်လာနိုင်သည် (Dayan et al ။ , 2010; ဟတ်စတန်၊ 2012) ။ သို့သော်မကြာသေးမီနှစ်များကဥရောပရှိအချို့သောကိုယ်စားလှယ်များမှပြုလုပ်သောစစ်တမ်းများသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသောလူကြီးများတွင်အကျင့်စွဲစွဲလမ်းမှုပျံ့နှံ့မှုတိုးပွားလာကြောင်းပြသခဲ့သည် (Mueller et al ။ , 2010).
CBB phenotype နှင့်ဆက်စပ်သောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များကိုလေ့လာခြင်းသည်အခြားအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများနှင့်တသမတ်တည်းရလဒ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သုတေသနပြသမှုသည်ဝယ်ယူသော ၀ ယ်ယူမှုသည်မြင့်မားသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုရမှတ်များ၊ 2012; di Nicola et al ။ , 2015; Munno et al ။ , 2015), အပြုသဘောနှင့်အနုတ်လက္ခဏာနှစ် ဦး စလုံးအရေးတကြီးစရိုက်များနှင့်အတူမြင့်တက်နှင့်အတူ (နှင်းဆီနှင့် Segrist, 2014), လောင်းကစားရောဂါအတွက်ရရှိသောတွေ့ရှိချက်များနှင့်တိုက်ဆိုင် (Janiri et al ။ , 2007; Tárrega et al ။ , 2015), IGD သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ၌ရှိသည် (Jiménez-Murcia et al ။ , 2014b; Farré et al ။ , 2015).
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် CBB သည်ထူးခြားသောရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ အထူးသဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများနှင့်အခြားအပြုအမူစွဲလမ်းမှုများတွင်အလွန်အမင်းပျံ့နှံ့နေသည် (Mueller et al ။ , 2010; Aboujaoude၊ 2014စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၊ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၊ ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်း၊ အခြားစိတ်ကြွဆေးထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်အစာစားခြင်းဆိုင်ရာရောဂါများ (Fernández-Aranda et al ။ ,) 2006, 2008).
CBB နှင့်အခြားအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လက်တွေ့နှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှုထောင့်နှစ်ခုလုံးတွင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောသောလက္ခဏာများလည်းတွေ့ရသည်။ ပထမ ဦး စွာ epidemiological လေ့လာမှုများကခိုင်မာသောလိင်ကွဲပြားမှုကိုညွှန်ပြသည် (Fattore et al ။ , 2014): CBB သည်အမျိုးသမီးများတွင်ပိုမိုပျံ့နှံ့သည် (Otero-Lópezနှင့် Villardefrancos, 2014), လောင်းကစားရောဂါ (Ashley နှင့် Boehlke, 2012), နှင့်လိင်စွဲ (Farré et al ။ , 2015) ယောက်ျားများတွင်ပိုမိုပျံ့နှံ့လျက်ရှိသည်။
CBB လူနာများ၏စိတ်ပညာအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏နမူနာအရလက်တွေ့နမူနာများနှင့်လေ့လာမှုအနည်းငယ်သည် CBB နှင့်အခြားအမူအကျင့်ဆိုင်ရာဖြည့်စွက်မှုများအကြားကွဲပြားခြားနားမှုကိုအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, ဒီလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်များနေသောခေါင်းစဉ်: (က) အမူအကျင့်စွဲနှင့်အတူလူနာများ၏ကြီးမားသောလက်တွေ့နမူနာများတွင် CBB နှင့်ဆက်စပ်သက်ဆိုင်ရာလူမှုရေး - လူ ဦး ရေအချိုးအစားနှင့်လက်တွေ့ဝိသေသလက္ခဏာများသိရှိနိုင်ရန်မှ; နှင့် (ခ) CBB ပရိုဖိုင်းကိုအခြားအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲချက်များ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှု၊ IGD၊ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနှင့်လောင်းကစားဆိုင်ရာရောဂါ) တို့ကိုနှိုင်းယှဉ်ရန်။
ဘာစီလိုနာရှိ Bellvitge တက္ကသိုလ်ဆေးရုံရှိစိတ်ရောဂါကုသမှုဌာနရှိရောဂါဗေဒလောင်းကစားယူနစ်သို့ရောက်ရှိလာသောလူနာများအားလုံးသည်ဤလေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်သူများဖြစ်နိုင်သည်။ လေ့လာမှုအတွက်ချန်လှပ်ထားသည့်စံသတ်မှတ်ချက်များမှာအော်ဂဲနစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ၊ ဥာဏ်ရည်မသန်စွမ်းမှုသို့မဟုတ်တက်ကြွသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါရှိခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ Bellvitge တက္ကသိုလ်ဆေးရုံသည်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများကိုကုသရန်အဆင့်မြင့်စောင့်ရှောက်မှုစင်တာအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားသောအများပြည်သူသုံးဆေးရုံတစ်ခုဖြစ်ပြီးအလွန်ရှုပ်ထွေးသောရောဂါဖြစ်ပွားမှုများ၏ကုသမှုကိုကြီးကြပ်သည်။ ဆေးရုံ၏metရိယာသည်ဘာစီလိုနာမြို့ပြinရိယာတွင်လူနှစ်သန်းကျော်ပါ ၀ င်သည်။
သင်တန်းသားများကို DSM-IV စံသတ်မှတ်ချက်အရရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် (SCID-I; First et al ။ , 1996) နှင့်ရောဂါတစ်ခုစီအတွက်သတ်သတ်မှတ်မှတ်မေးခွန်းများအသုံးပြုခြင်း။ စိတ်ပညာရှင်များနှင့်စိတ်ရောဂါအထူးကုဆရာဝန်များကအင်တာဗျူးများကို ၁၅ နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်သည်။
လေ့လာမှုတွင်ပါဝင်သည် n = ၃၃၂၄ လူနာများ၊ ၄ င်းတို့၏ရောဂါလက္ခဏာခွဲစိတ်မှုအရအုပ်စု ၅ ခုခွဲခြားထားသည် - CBB (n = 110), လိင်စွဲ (n = ၂၈)၊ IGD (n = ၅၁)၊ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု (n = 41) နှင့်လောင်းကစားရောဂါ (n = 3094) ။ အပြန်အလှန်သီးသန့်စံသတ်မှတ်ချက်ကိုအုပ်စုများတွင်လူနာများထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာဤလေ့လာမှုတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်စွဲလမ်းမှုသည်အပြုအမူစွဲလမ်းမှုတစ်ခုစီ၏လက်တွေ့အခြေအနေကိုခန့်မှန်းခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းတို့အတွက်ခွင့်ပြုရန်တစ်ချိန်တည်းတွင်မဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါ။ တစ် ဦး ထက်ပိုသောအပြုအမူစွဲရှိခြင်း၏စံတွေ့ဆုံဘို့ငါတို့ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကနေဖယ်ထုတ်ထား။
လူနာများကို DSM-IV အတွက်ဖွဲ့စည်းထားသည့်လက်တွေ့အင်တာဗျူးအပြီးလုပ်ထားသည့်စနစ်တကျရှိသောမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းကို အသုံးပြု၍ အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည် (SCID-I; First et al ။ , 1996), တသက်လုံး impulsive အပြုအမူတွေ၏တည်ရှိမှု, ဖုံးလွှမ်းအမည်ရအရက်သေစာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု, comorbid ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မှုရောဂါများ (ထိုကဲ့သို့သော CBB, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ, နှင့် IGD နှင့်အင်တာနက်စွဲ) ။
DSM သတ်မှတ်ချက်များအရရောဂါလောင်းကစားခြင်းအတွက်ရောဂါရှာဖွေရေးမေးခွန်းလွှာ (Stinchfield, 2003)
ဒီ ၁၉ ပုဒ်ပါသောမေးခွန်းလွှာက DSM-IV (American Psychiatric Association) ကိုအကဲဖြတ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ 1994) ရောဂါဗေဒလောင်းကစားများအတွက်ရောဂါရှာဖွေစံ (GD ကိုခေါ်ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာ) ။ မူရင်းဗားရှင်းတွင် SOGS ရမှတ်များနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသည်။r ကိုယ်စားလှယ်နမူနာများအတွက် = 0.77 နှင့် r လောင်းကစားကုသရေးအဖွဲ့များအတွက် = 0.75 (Stinchfield, 2003)] ။ ဒီလေ့လာမှုမှာအသုံးပြုတဲ့စပိန်လိုက်လျောညီထွေအတွက်ပြည်တွင်းရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုအထွေထွေလူ ဦး ရေအတွက်α = 0.81 နှင့်လောင်းကစားကုသမှုနမူနာများအတွက်α = 0.77 ဖြစ်ခဲ့သည် (Jiménez-Murcia et al ။ , 2009) ။ ဒီလေ့လာမှုမှာ GD အတွက် DSM-5 စံသတ်မှတ်ချက်စုစုပေါင်းကိုဆန်းစစ်ခဲ့တယ်။ နမူနာထဲမှာ Cronbach ရဲ့ alpha (α = 0.81) အလွန်ကောင်းသောဖြစ်ခဲ့သည်။
South Oaks လောင်းကစားမျက်နှာပြင် (SOGS) (Lesieur နှင့် Blume, 1987)
ဤအစီရင်ခံစာသည်အပိုင်း ၂၀ ပါ ၀ င်သည့်စစ်တမ်းကောက်ယူမှုတွင်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောရောဂါဗေဒ၊ ပြproblemနာနှင့်ပြnonနာမဟုတ်သောလောင်းကစားသမားများအကြားခွဲခြားဆက်ဆံသည်။ ဒီလေ့လာမှုမှာအသုံးပြုတဲ့စပိန်အတည်ပြုဗားရှင်းဟာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အတွင်းပိုင်းရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု (α = 20) နဲ့စမ်းသပ်မှု - ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်းယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုပြသခဲ့သည်။r = 0.98; Echeburúa et al ။ , 1994) ။ ဤလုပ်ငန်း၏နမူနာတွင်ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုသည်လုံလောက်သည် (α = 0.76) ။
Mcelroy et al အရ compulsive ဝယ်ယူများအတွက် Diagnostic စံ။ (1994)
၄ င်းတို့၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်တရားဝင်မှုကိုမဆုံးဖြတ်ရသေးသော်လည်းဤစံနှုန်းများကိုသုတေသနအသိုင်းအဝိုင်းတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လက်ခံခဲ့သည် (Tavares et al ။ , 2008) ။ မှတ်သားသင့်သည်မှာ DSM (သို့) ICD-10 အတွက် CBB အတွက်ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းစံသတ်မှတ်ချက်ကိုလက်ခံခြင်းမရှိပါ။ လက်ရှိတွင် CBB ရောဂါရှာဖွေခြင်းကို“ ၀ ယ်ခြင်းသဘောထားများ၊ ဆက်စပ်နေသောခံစားချက်များ၊ နောက်ကွယ်အတွေးများနှင့် ၀ ယ်ခြင်းနှင့်စျေးဝယ်ခြင်းနှင့်မည်သည့်အရာ၏အာရုံစူးစိုက်မှု” ကိုလေ့လာသည့်မျက်နှာချင်းဆိုင်မျက်နှာချင်းဆိုင်အင်တာဗျူးများမှဆုံးဖြတ်ရန်အကြံပြုသည် (Müller et al ။ , 2015b).
Griffiths ကနှင့် Hunt ကအညီ IGD များအတွက် diagnostic စံ (1995, 1998)
IGD ရောဂါကိုအကဲဖြတ်ရန်နှင့်ဗွီဒီယိုဂိမ်းများအပေါ်မှီခိုမှုအဆင့်ကိုတည်ဆောက်ရန်လက်တွေ့ကျွမ်းကျင်သူများသည်ဂရစ်ဖစ်နှင့်ဟန့်တို့၏ဒီဇိုင်းပုံစံကိုသုံးသပ်ခြင်းဖြင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည် (1995, 1998) ။ ဤတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုတွင်ပြသနာများအပြုအမူ၏ကြိမ်နှုန်း၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်နေ့စဉ်လည်ပတ်မှုတွင်ဖြစ်ပေါ်လာသော ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုများကဲ့သို့သောရှုထောင့်များကိုအကဲဖြတ်သည်။
DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, DSM-IV) အရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုအတွက်ရောဂါရှာဖွေသတ်မှတ်ချက်။ 2000)
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုကိုအကဲဖြတ်ရန် DSM-IV-TR (အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း)၊ 2000) ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorders ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်မသတ်မှတ်ထားပါအပိုင်း (302.9) ၌တည်၏။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကဲဖြတ်ရာတွင်အောက်ပါလက်တွေ့ဖော်ပြချက်အထူးအလေးခြိနျပေးထားခဲ့သည်: "။ သာအသုံးပြုစေသောအရာတို့ကိုအတိုင်းတစ်ဦးချင်းအားဖြင့်ကြုံတွေ့ကြသူချစ်သူတွေတစ်ဆက်ခံပါဝင်သောထပ်ခါတလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးဟာတစ်ပုံစံအကြောင်းကိုဒုက္ခဆင်းရဲ"
အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုကိုအကဲဖြတ်ရန်၊ Echeburúaမှစံ ၉ ချက်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည့်လက်တွေ့အင်တာဗျူးတစ်ခု (1999) ဟုတ်ကဲ့ / မတုံ့ပြန်ပါ။ ရမှတ် (၄) ခုမှ (၆) ခုအနေဖြင့်မှီခိုမှုအန္တရာယ်နှင့် ၇-၉ ပြproblemနာသည်ပြေလည်သွားသည်။ အင်တာနက်စွဲအမျိုးအစားကိုအင်တာနက်အလွန်အကျွံနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးပြုခြင်း (လူမှုရေးကွန်ရက်၊ ဗွီဒီယိုကြည့်ခြင်း၊ ရုပ်မြင်သံကြားဇာတ်လမ်းတွဲများနှင့်အွန်လိုင်းမှရုပ်ရှင်များစသည်တို့) ကိုအဓိကထားသည်။ ဤအရာများသည်ဤအပြုအမူကိုလုပ်ဆောင်ရန်တိုက်တွန်းခြင်းသို့မဟုတ် ၄ င်း၏ကြိမ်နှုန်းကိုလျှော့ချရန်ပျက်ကွက်သည့်ကြိုးပမ်းမှုများစသည်တို့ကိုလည်းလေ့လာသည်။
စိတ်ထားနှင့်ဇာတ်ကောင်စာရင်း - ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော (TCI-R) (Cloninger, 1999)
TCI-R သည်စိတ် ၀ င်စားမှုလေးမျိုး (အသစ်အဆန်းရှာဖွေခြင်း၊ အန္တရာယ်မှရှောင်ရှားခြင်း၊ ဆုလာဘ်မှီခိုမှုနှင့်ဇွဲရှိခြင်း) နှင့်ဇာတ်ကောင်သုံးမျက်နှာ (မိမိကိုယ်ကိုလမ်းညွှန်ခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုလွန်ကျူးခြင်း) ကိုတိုင်းတာသည်။ ။ ပစ္စည်းအားလုံးကို 240-point Likert-type စကေးဖြင့်တိုင်းတာသည်။ စပိန်ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသောဘာသာပြန်ကျမ်းတွင်ဖော်ပြထားသောအတိုင်းအတာများသည်လုံလောက်သောအတွင်းတသမတ်တည်းရှိခြင်းကိုပြသည် (Cronbach ၏ alpha α =5၏တန်ဖိုးတန်ဖိုး။ Gutiérrez-Zotes et al ။ , 2004) ။ ဤလေ့လာမှုတွင်အသုံးပြုသောနမူနာတွင် Cronbach ၏ alpha (α) သည်ကောင်းမွန်သောအကွာအဝေးတွင်ရှိသည် (စကေးတစ်ခုချင်းစီအတွက်အညွှန်းသည် စားပွဲတင် 2).
ရောဂါလက္ခဏာစစ်ဆေးရမည့်စာရင်း - ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော (SCL-90-R) (Derogatis, 1990)
SCL-90-R သည်ကျယ်ပြန့်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြopနာများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများကိုအကဲဖြတ်သည်။ ဤမေးခွန်းလွှာတွင်ပစ္စည်း ၉၀ ပါ ၀ င်ပြီးအဓိကလက္ခဏာ ၉ ခုပါ ၀ င်သည်။ အချက်ပြမှု၊ စွဲစွဲလမ်းမှု၊ ၎င်းတွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာညွှန်းကိန်း (၃) ခုလည်းပါ ၀ င်သည်။ (၁) အလုံးစုံစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများကိုတိုင်းတာရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်သည့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြင်းထန်မှုအညွှန်းကိန်း (GSI); လက္ခဏာပြင်းထန်မှုကိုတိုင်းတာရန် (90) အပြုသဘောလက္ခဏာဒုက္ခဆင်းရဲညွှန်းကိန်း (PSDI), နှင့် (1) Self- အစီရင်ခံလက္ခဏာများကိုထင်ဟပ်သောအပြုသဘောလက္ခဏာစုစုပေါင်း (PST) ။ စပိန်၏အတည်ပြုမှုစကေးသည်သုညဒသမ ၀.၅ ရှိသည့်ကောင်းမွန်သောစိတ်ဓာတ်ညွှန်းကိန်းများရရှိခဲ့သည် (Cronbach ၏ alpha; Martínez-Azumendi et al ။ , 2001) ။ ဤလေ့လာမှု၏နမူနာတွင် Cronbach ၏ alpha (α) သည်ကောင်းမွန်သောအကွာအဝေးတွင်ရှိသည် (စကေးတစ်ခုချင်းစီအတွက်ညွှန်းကိန်းများပါဝင်သည်။ စားပွဲတင် 2).
အရက်သုံးစွဲခြင်းမမှန်စစ်ဆေးခြင်းစစ်ဆေးခြင်း (AUDIT) (Saunders et al ။ , 1993)
ဤစမ်းသပ်မှုသည်အရက်အလွန်အကျွံသောက်သုံးရန်အတွက်ရိုးရှင်းသောစစ်ဆေးမှုနည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်တီထွင်ခဲ့သည်။ AUDIT တွင်အရက်သုံးစွဲမှုအဆင့်များ၊ အရက်မှီခိုမှုလက္ခဏာများနှင့်အရက်နှင့်ဆက်စပ်သောအကျိုးဆက်များကိုစစ်ဆေးသောမေးခွန်း ၁၀ ခုပါ ၀ င်သည်။ အတွင်းသဟဇာတဖြစ်မှုကိုမြင့်မားစွာတွေ့ရှိရပြီးအနားယူခြင်း - ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်းမှဒေတာများသည်မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှု (10) နှင့် sensitivity 0.86 ဝန်းကျင်ကိုအကြံပြုထားသည်။ ကွဲပြားခြားနားသော setting တွင်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောစံများအတွက်တိကျတဲ့ပျမ်းမျှ 0.90 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို။ Reinert နှင့် Allen တို့သတ်မှတ်သောအကွာအဝေးများအပေါ် အခြေခံ၍ ဤလေ့လာမှုအတွက်အမျိုးအစားသုံးမျိုးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့သည်။2002): null-low (အမျိုးသမီးများအတွက် ၆ နှစ်အောက်ရမှတ်များ၊ အမျိုးသားများအတွက် ၈ နှစ်အောက်)၊ အလွဲသုံးစားမှု (အမျိုးသမီးများအတွက် ၆ မှ ၂၀ ကြားနှင့်အမျိုးသားများအတွက် ၈ မှ ၂၀ ကြားရမှတ်များ) နှင့်မှီခိုမှုအန္တရာယ် (၂၀ အထက်အထက်ရမှတ်များ) ။
လောင်းကစားခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လူ ဦး ရေဆိုင်ရာ၊ လက်တွေ့နှင့်လူမှုရေး / မိသားစုဆိုင်ရာပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများကိုအခြားနေရာများတွင်ဖော်ပြထားသည့် Semi- စနစ်တကျထားပြီးမျက်နှာချင်းဆိုင်လက်တွေ့အင်တာဗျူးကို အသုံးပြု၍ တိုင်းတာသည် (Jiménez-Murcia et al ။ , 2006) ။ အချို့သော CBB ၏အမူအကျင့်ပြောင်းလဲမှုများကို CBB စတင်ခြင်း၏သက်တမ်း၊ စျေးဝယ်ခြင်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုအတွင်းအနည်းဆုံးငွေကြေးနှင့်ရင်းနှီးမြှပ်နှံခြင်းနှင့်စုစုပေါင်းကြွေးမြီစုဆောင်းခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
လက်ရှိလေ့လာမှုကိုဟယ်လ်စင်ကီကြေငြာချက်၏နောက်ဆုံးမူကွဲနှင့်အညီပြုလုပ်ခဲ့သည်။ University of Bellvitge ကျင့်ဝတ်ကော်မတီ၏သုတေသနဆိုင်ရာသုတေသနကော်မတီသည်ဤလေ့လာမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီးလက်မှတ်ရေးထိုးထားသောခွင့်ပြုချက်ကိုတက်ရောက်သူအားလုံးထံမှရရှိခဲ့သည်။ အတွေ့အကြုံရှိသောစိတ်ပညာရှင်နှင့်စိတ်ရောဂါအထူးကုများသည်မျက်နှာချင်းဆိုင်လက်တွေ့ကုသမှုနှစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
စာရင်းအင်းဆိုင်ရာဆန်းစစ်မှုကို Windows အတွက် Stata13.1 ဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပထမ ဦး စွာဆင်းသက်လာပင်ကိုယ်မူလပြွတ်အကြား sociodemographical, လက်တွေ့နှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအစီအမံများ၏နှိုင်းယှဉ် chi-square စမ်းသပ်မှု (χ) အပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သည်2) အမျိုးအစား variable တွေကိုနှင့်အရေအတွက်အစီအမံများအတွက်ကှဲလှဲ (ANOVA) ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်။ Cohen's-d pairwise နှိုင်းယှဉ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစား (|d|> 0.50 အားအလယ်အလတ်သက်ရောက်မှုအရွယ်အစားဟုသတ်မှတ်ပြီးd|> 0.80 မြင့်မားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစား) ။ Bonferroni-Finner ၏ဆုံးမပဲ့ပြင်မှုသည် I-type အမှားအတွက်ထိန်းချုပ်ထားပြီး၊
ဒုတိယ၊ multinomial model သည် CBB ၏တည်ရှိမှုကိုအခြားအမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုများ (လောင်းကစား၊ အင်တာနက်၊ IGD နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း) တွင်ပါဝင်သူများ၏လိင်၊ အသက်၊ စတင်ခြင်း၊ ပညာရေး၊ အဆင့်အတန်းနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများ၏စွမ်းရည်ကိုတန်ဖိုးထားသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ) ။ ဤပုံစံသည် multiclass-nominal-စံများ (အမျိုးအစားနှစ်မျိုးထက်ပိုပြီးမှီခိုသော variable များ) သို့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆုတ်ယုတ်မှု၏ယေဘူယျဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ parameters များကိုရည်ညွှန်းအမျိုးအစားအဆင့်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုခန့်မှန်းရန်ခန့်မှန်းနေကြသည်။ ဤလေ့လာမှုတွင် CBB ၏တည်ရှိမှုကိုခွဲခြားဆက်ဆံမှုပြုသည့်ပုံစံရရှိရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဤရောဂါရှာဖွေမှုပုံစံကိုရည်ညွှန်းအဆင့်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, လွတ်လပ်သော variable တွေကို၏အစုတစ်ပြိုင်နက် CBB ဖော်ထုတ်အတွက် variable တစ်ခုချင်းစီ၏တိကျသောအလှူငွေဆုံးဖြတ်ရန်မော်ဒယ်သို့ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ မော်ဒယ်၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်စွမ်းကို McFadden pseudo-R ကို အသုံးပြု၍ အကဲဖြတ်သည်2 ကိန်း။
တတိယအချက်အနေဖြင့် SCL-90-R စိတ်ကျရောဂါ၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့် GSI ပမာဏများ၌မှတ်ပုံတင်ထားသောစိတ်ပညာလက္ခဏာများအဆင့်တွင်ပါ ၀ င်သူများ၏လိင်၊ အသက်၊ စတင်သက်တမ်းနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်စွမ်းကိုတန်ဖိုးထားခြင်း။ ENTER လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းလက္ခဏာများအဆင့်တိုင်းအတွက်အချက်တစ်ခုစီ၏သတ်သတ်မှတ်မှတ်ထည့် ၀ င်မှုရရှိရန်ခန့်မှန်းသူများကိုတစ်ပြိုင်တည်းထည့်သွင်းရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။
ဂဏန်း Figure11 CBB ကြောင့်ကုသမှုအထူးပြုဌာနသို့လူနာများရောက်ရှိခြင်းသည်အခြားအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲချက်များ (လောင်းကစားခြင်း၊ လိင်စွဲလမ်းမှု၊ IGD၊ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုများ) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပြသသည်။ CBB ကြောင့်ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်မှုများ၏ပျံ့နှံ့မှုသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ၂.၄၈% မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ၅.၅၃% သို့တိုးတက်ခဲ့ပြီးသိသိသာသာတိုးတက်သောလမ်းကြောင်းသစ်ရရှိခဲ့သည် (χ2= 17.3, df = 1, p = 0.006) နှင့် linear ထံမှအဘယ်သူမျှမကစာရင်းအင်းသိသိသာသာသွေဖည် (χ2= 7.27, df = 9, p = 0.609) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကလောင်းကစားခြင်းဆိုင်ရာရောဂါပျံ့နှံ့မှုသည်အခြားအပြုအမူဆိုင်ရာဖြည့်စွက်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားကြောင်းဖော်ပြသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် (၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် IGD မှအပ) IGD၊ အင်တာနက်နှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုတို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက CBB အတွက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပျံ့နှံ့မှုပိုမိုမြင့်မားသော်လည်း၊
စားပှဲ Table11 ရောဂါရှာဖွေရေးအပိုင်းခွဲများနှင့်လူနာ၏လူမှုဗေဒဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများအပြင်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များပါ ၀ င်သည်။ CBB အုပ်စု (၇၁.၈%) တွင်အမျိုးသမီးများ၏အကြိမ်ရေသည်အခြားရောဂါလက္ခဏာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုမြင့်မားသည် (လိင်စွဲလမ်းမှုတွင် ၃.၆% အကြားအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုမှ ၂၆.၈%) ။ အခြားအပြောင်းအလဲများနှင့် ပတ်သက်၍ CBB သည် (က) IGD နှင့်လောင်းကစားစွဲခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဆင့်မြင့်ပညာရေး၊ (ခ) IGD နှင့်အင်တာနက်စွဲအုပ်စုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း (သို့) လက်တွဲဖော်နှင့်အတူနေထိုင်ခြင်းပိုမိုမြင့်မားခြင်း၊ (ဂ) IGD နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပိုမိုမြင့်မားသောအလုပ်အကိုင်များ၊ နှင့် ()) လောင်းကစားခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်အရက်သေစာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း။
အမျိုးအစား variable များအဘို့အအဖြေရှာတဲ့ Subtype များအကြားနှိုင်းယှဉ်: chi-square စမ်းသပ်မှုနှင့်အခြားအဖြေရှာတဲ့မျိုးကွဲ vs..
စားပှဲ Table22 လူနာများ၏အသက်၊ စတင်ခြင်းအသက်နှင့်ပြproblemနာအပြုအမူ၏ကြာချိန်၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများ (SCL-90-R scales) နှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များ (TCI-R scales) - လက်တွေ့အခြေအနေကိုတိုင်းတာသည့် variable များအတွက် CBB နှင့်အခြားရောဂါရှာဖွေခြင်းအမျိုးအစားခွဲများအကြားယုတ်နှိုင်းယှဉ်မှုများပါဝင်သည်။ ။ CBB ကိုလိင်စွဲလမ်းသည့်အဖွဲ့နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စာရင်းအင်းကွဲပြားခြားနားမှုမရှိခဲ့ပါ။ IGD၊ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနှင့်လောင်းကစားဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် CBB ၏လက်တွေ့အချက်အလက်များကိုအောက်ပါအချက်များဖြင့်ဖော်ပြသည် - (က) IGD နှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုမြင့်မားသောပျမ်းမျှအသက်နှင့်အသက်အရွယ်၊ (ခ) တစ်ခုလုံးအနေဖြင့်ပိုမိုမြင့်မားသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများ (SCL-90-R အကြေးများသည်အများအားဖြင့်ပိုမိုမြင့်မားသောရမှတ်များရရှိသည်); (ဂ) ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအသစ်များရှာဖွေခြင်း၊ ထိခိုက်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ခြင်း (လောင်းကစားရောဂါနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်)၊ ဆုလာဘ်မှီခိုမှု (IGD နှင့်လောင်းကစားရောဂါနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်)၊ ဇွဲရှိခြင်း (IGD နှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်) နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း (စ) IGD နှင့်လောင်းကစားရောဂါနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်) ။
အခြေခံမှာအဖြေရှာတဲ့မျိုးကွဲများအကြားလက်တွေ့ profile များကိုနှိုင်းယှဉ်: ANOVA နှင့် pairwise နှိုင်းယှဉ်များအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစား.
ဂဏန်း Figure22 အသေးစိတ်လေ့လာမှု၏သက်ဆိုင်ရာ variable တွေကိုအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောရောဂါရှာဖွေအမျိုးအစားခွဲများများအတွက်လက်တွေ့နှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး profile များကိုအကျဉ်းချုပ်နှစ်ခုရေဒါ - ဇယားများပါဝင်သည်။ အမျိုးသမီးများရာခိုင်နှုန်းသည်ကျားမခွဲဝေမှုအတွက်တွက်ချက်ခြင်းနှင့်အရေအတွက်လက်တွေ့လက်တွေ့တိုင်းတာမှုများအတွက်ကိုယ်ပိုင်နမူနာတွင် z-standardized ရမှတ်များ (ကွဲပြားမှုအကွာအဝေးများ - အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးအမြင့်ဆုံးသို့ပြောင်းလဲနိုင်မှုများအရစံသတ်မှတ်ချက်ထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်)
လေ့လာမှုနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များအတွက်အဓိကလက်တွေ့ variable တွေကိုများအတွက်ရေဒီယိုဇယားကွက်.
အခြားအမူအကျင့်စွဲချက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် CBB ၏တည်ရှိမှုအတွက်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပုံစံ
စားပှဲ Table33 လူနာများ၏လိင်၊ အသက်၊ အရွယ်၊ အရွယ်၊ ပညာရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုခွဲခြားဆက်ဆံနိုင်သောစွမ်းရည်ကိုတိုင်းတာသည့်ပုံစံမျိုးစုံပုံစံ၏ရလဒ်များပါ ၀ င်သည်။ အခြားသောရောဂါရှာဖွေရေးပုံစံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအမျိုးသမီးများနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီတွင် CBB ၏ဖြစ်နိုင်ခြေသည်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏စရိုက်လက္ခဏာအသစ်များရှာဖွေခြင်း၊ သို့သော်ယေဘုယျလူ ဦး ရေစံနှုန်းရမှတ်များကိုစဉ်းစားသောအခါမိမိကိုယ်ကိုညွှန်ကြားခြင်းအပေါ်ရမှတ်များသည်အုပ်စုများအားလုံးအတွက်ဆေးခန်းအနိမ့်ပိုင်းတွင်ရှိသည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံကိုဘေးအန္တရာယ်မှကာကွယ်ရန်ကိစ္စတွင်ပေါ်ထွက်လာသည်။ ရောဂါရှာဖွေရေးအဖွဲ့အားလုံးသည်ဆေးခန်းမြင့်မားပြီး CBB ရှိသူများသည်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှုသည် CBB ကိုအင်တာနက်နှင့် IGD များနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ အဆင့်မြင့်ပညာရေးအဆင့်များသည်လောင်းကစားဆိုင်ရာရောဂါနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် CBB ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုမြင့်တက်စေပြီး၊
အသက်၊ စတင်ခြင်း၊ လေ့လာမှုအဆင့်၊ အရပ်ဘက်အခြေအနေနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဆိုင်ရာခွဲခြားဆက်ဆံမှုခွဲခြားဆက်ဆံမှုစွမ်းရည်ကိုရောဂါလက္ခဏာခွဲတစ်ခု၏ရှေ့မှောက်တွင် (n = 3.324).
စားပှဲ Table44 CBB အုပ်စုအတွက် SCL-90-R မှတစ်ဆင့်တိုင်းတာသောစိတ်ကျရောဂါ၊ စိုးရိမ်မှုနှင့် GSI အညွှန်းကိန်းများပေါ်ရှိလူနာများ၏လိင်၊ အသက်၊ စတင်မှုသက်တမ်းနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်လက္ခဏာများ၏ခန့်မှန်းနိုင်စွမ်းကိုတိုင်းတာသည့်နည်းအမျိုးမျိုးသုံးခုပါ ၀ င်သည် (n = 110) ။ စိတ်ကျရောဂါအဆင့်မြင့်ခြင်းသည်အမျိုးသမီးများနှင့်အသစ်သောရှာဖွေမှု၊ အန္တရာယ်မှရှောင်ရှားခြင်းနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတို့တွင်ရမှတ်များမြင့်မားသောလူနာများနှင့်ဆက်စပ်သည်။ အမျိုးသမီးများအတွက်စိုးရိမ်စိတ်မြင့်မားစွာမှတ်ပုံတင်ထားပြီးအန္တရာယ်မှရှောင်ရှားနိုင်သည့်ရမှတ်များနှင့်မိမိကိုယ်ကိုလမ်းညွှန်မှုနိမ့်ကျသောလူနာများအားမှတ်ပုံတင်ထားပါသည်။ မြင့်မားသော GSI ရမှတ်များသည်အမျိုးသမီးများနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ အသစ်အဆန်းရှာဖွေခြင်း၊ အန္တရာယ်မှရှောင်ရှားခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုလွန်ကဲခြင်းများအတွက်ရမှတ်များရယူခြင်း၊ နှင့် Self- ညွှန်ကြား၌အနိမ့်ရမှတ်များ။
CBB အုပ်စု၏စိတ်ပညာအဆင့်၏သက်တမ်း၊ စတင်ခြင်းအသက်နှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များ (ခန့်မှန်းနိုင်စွမ်း)n = 110).
ဒီလေ့လာမှုကအခြားအပြုအမူစွဲလမ်းမှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက CBB ၏ထူးခြားသောလက္ခဏာများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာသည်။ လောင်းကစားခြင်း၊ အင်တာနက်ဂိမ်းကစားခြင်း၊ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်စွဲလမ်းမှု။ ကုသမှုခံယူသောလူနာများနမူနာတွင်ရရှိသောရလဒ်များအရ CBB သည်အခြားစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်သော်လည်း၎င်းင်း၏ဖြစ်ရပ်များတွင်သိသိသာသာကွဲပြားမှုများရှိသည်။ CBB သည်အမျိုးသမီးများ၏မြင့်မားသောအချိုးအစား၊ သက်ကြီးရွယ်အိုနှင့်အသက်အရွယ်စတင်ခြင်း၊ အထီးကျန်သောယေဘူယျစိတ်အခြေအနေနှင့်အသစ်တွေ့ရှိမှုရှာဖွေခြင်းနှင့်အန္တရာယ်မှရှောင်ရှားခြင်းနှင့်အလယ်အလတ်ဆုလာဘ်မှီခိုမှု၊ ဇွဲရှိခြင်းနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ ဤသဘောမျိုးဖြင့် CBB လူနာများကိုလှုံ့ဆော်မှုအသစ်များနှင့်ဆုလာဘ်အသစ်များကိုစပ်စုခြင်း၊ ပျင်းရိငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသော၊ တက်ကြွစွာရှာဖွေသူများအဖြစ်ဖော်ပြနိုင်သော်လည်းတစ်ချိန်တည်းမှာပင်လာမည့်စိန်ခေါ်မှုများကိုမျှော်လင့်။ အဆိုးမြင်ခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ခြင်းတို့ကိုပြသနိုင်သည်။ လူမှုရေးယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပံ့ပိုးသူများသည် CBB ၏စတင်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းတွင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဏ္financialာရေးအခြေအနေ၊ ရုပ်ဝါဒတန်ဖိုးများနှင့်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကဲ့သို့သောအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်နိုင်သည် (Dittmar, 2005) ။ သိုလှောင်ခြင်းတွင်အများဆုံးတင်ပြသောရောဂါလက္ခဏာများအနက်တစ်ခုမှာအမူအကျင့်ကိုရယူခြင်းနှင့်အခြားလေ့လာမှုများကဤရောဂါနှစ်ခုအကြားတွင်တူညီသောအချက်များကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည် (Frost et al ။ , 2002) ။ လက်တွေ့ကွဲပြားမှုသည်လိင်စွဲလမ်းမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုနည်းပါးပြီးလောင်းကစားဆိုင်ရာရောဂါ၊ IGD နှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုတို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပိုမိုမြင့်မားသည်။
ကျားမရေးရာနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာမှုပုံစံငယ်များအကြားခြားနားချက်များသည်ဤလေ့လာမှုတွင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ CBB အုပ်စုတွင်အခြားအမူအကျင့်စွဲချက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအမျိုးသမီးများ၏သိသိသာသာမြင့်မားသောအချိုးအစားပါဝင်သည်။ ဤရလဒ်သည်အခြားလေ့လာမှုများနှင့်လည်းကိုက်ညီသည်။ အမျိုးသမီးများသည်အတင်းအကျပ် ၀ ယ်ယူမှုများပိုမိုမြင့်မားကြောင်းကိုလည်းတင်ပြခဲ့သည် (Fattore et al ။ , 2014; အိုတိုရိုလိုပက်ဇ်နှင့်ဗီလာဒယ်ဖရန်ကော့စ်, 2014) ။ CBB ရှိအမျိုးသမီးများ၏ပျံ့နှံ့မှုမြင့်တက်ရခြင်း၏အကြောင်းပြချက်များမှာစျေးဝယ်ခြင်းနှုန်းပိုမိုမြင့်မားခြင်းနှင့်ဤအုပ်စုတွင်အပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောလူမှုယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့်ဆက်စပ်နေဖွယ်ရှိသည် (Maraz et al ။ , 2015).
ဤလေ့လာမှု၏ရလဒ်များအရကျွန်ုပ်တို့၏ CBB ကုသမှုအထူးပြုယူနစ်သို့တက်ရောက်သူလူနာအချိုးအစားသည်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းအင်တာနက်၊ IGD နှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုအလားတူအလားအလာများနှင့်အတူတိုးပွားလာရန်အလားအလာရှိကြောင်းကိုလည်းပြသခဲ့သည်။ သို့သော်လောင်းကစားရောဂါနှင့်ပတ်သက်သည့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကကုသမှုခံယူသောလူနာများ၏အချိုးအစားမှာသိသိသာသာနိမ့်ကျသည်။ ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်း CBB ညှိနှိုင်းမှုများ၏အချိုးအစားပြောင်းလဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များသည် ၂၀၁၀ နှင့် ၂၀၁၃ နှစ်များအကြားတွင်ဥရောပစီးပွားရေးအကျပ်အတည်းနှင့်စပိန်နိုင်ငံတို့တွင်အဆိုးရွားဆုံးသောစီးပွားရေးအကျပ်အတည်းများနှင့်တိုက်ဆိုင်မှုကိုညွှန်ပြနေသည်။ ထို့အပြင်ဤကျဆင်းမှုငွေအမြောက်အများလိုအပ်နေသောအခြားအပြုအမူစွဲလမ်းရှာဖွေစူးစမ်းရလဒ်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။ လောင်းကစားရောဂါဖြစ်မှုတွင်ဥရောပစီးပွားရေးအကျပ်အတည်းကာလအတွင်းပျံ့နှံ့မှုသိသိသာသာကျဆင်းခြင်းကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့သည် (Jiménez-Murcia et al ။ , 2014b) အထူးသဖြင့် 2010 ခုနှစ်။
လူနာများ၏အသက်နှင့်ပြသနာများသည်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူစတင်ခြင်း၏ပျမ်းမျှအသက်အရွယ်သည်ရောဂါရှာဖွေခြင်းပုံစံငယ်များနှင့် CBB တွင်တွေ့ရသောသက်ကြီးရွယ်အိုများ (ဆိုလိုသည်မှာအသက် ၄၃.၃ နှစ်ဖြစ်ပြီးအသက် ၃၈.၉ နှစ်ဖြစ်ခြင်း၊ လောင်းကစားခြင်းနှင့်လိင်စွဲလမ်းခြင်းတို့ဖြင့်နီးကပ်စွာနောက်ဆက်တွဲ) နှင့်လူငယ်များအတွက် IGD (ဆိုလိုသည်မှာအသက် ၂၂.၀ နှင့်ဆိုလိုသည်မှာယခုလေ့လာမှုတွင် ၁၉.၉ စတင်ခြင်း) ။ ဤတွေ့ရှိချက်သည်ငယ်ရွယ်သောအသက်အရွယ်သည်ပြvideoနာရှိသည့်ဗီဒီယိုဂိမ်းနှင့်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည် (Griffiths and Meredith, 2009; အာဟပ် et al ။ , 2011; Jiménez-Murcia et al ။ , 2014a) ။ လူငယ်များအကြားရုပ်ဝါဒတန်ဖိုးများကိုထောက်ခံခြင်းကဲ့သို့သောအခြားပြောင်းလဲမှုများကိုသိပ္ပံနည်းကျစာပေတွင်စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများ၊ အထူးသဖြင့်မဝယ်မဝယ်ဝယ်ခြင်းကိစ္စများတွင်ထိရောက်သောဖျန်ဖြေခြင်းအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ 2005).
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေနှင့်ရောဂါလက္ခဏာခွဲခြားခြင်းအကြားကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များခြားနားမှုများသည်လည်းသက်ဆိုင်သည်။ CBB နှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုသည်အလားတူပရိုဖိုင်းများကိုပြသခဲ့သည်။ သူတို့၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရမှတ်များသည်လောင်းကစား၊ IGD နှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုများထက်ပိုမိုဆိုးရွားသည်။ အမူအကျင့်စွဲလမ်းနေသော်လည်း Impulsivity သည်အဓိကကျသောလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည် (Dell'Osso et al ။ , 2006; Billieux et al ။ , 2012; Lorains et al ။ , 2014) များစွာသောလေ့လာမှုများသည်လည်းမြင့်မားသော compulsivity တည်ရှိမှုကိုပြသသည် (Blanco et al ။ , 2009; Fineberg et al ။ , 2010; Bottesi et al ။ , 2015) ။ impulsivity နှင့် compulsivity အားချုပ်တည်းနိုင်သောစွမ်းရည်ရှိခြင်း၏လိုငွေပြမှုများဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, Impulsivity နှင့် compulsivity အကြားအဓိကခြားနားချက်သည်ယခင်ချက်ချင်းဆန္ဒပြည့်ခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်ရှာခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်, မသင်မနေရအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုကနေကယ်ဆယ်ရေးရှာဖွေဖို့ရည်ရွယ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ဤလေ့လာမှုမှရရှိသောတွေ့ရှိချက်များအရဤလက္ခဏာများပေါင်းစပ် (impulsive / compulsive) သည် CBB နှင့်လိင်စွဲခြင်းတို့တွင်အထူးထင်ရှားသည်။ ဤသည်ဤရောဂါများကိုဖြတ်ပြီး phenotypical နှင့်ဖြစ်နိုင်သည် endophenotypical ထပ်၏တည်ရှိမှု postulate ဖို့ကျွန်တော်တို့ကို ဦး ဆောင်နေသည်။ ဤရလဒ်သည် CBB နှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုတို့တွင်များစွာသောမျှဝေထားသောအင်္ဂါရပ်များတွေ့ရှိခဲ့သည့်ယခင်သုတေသနကိုအထောက်အကူပြုသည် (Müller et al ။ , 2015a) နှင့်အခြားအပြုအမူစွဲ (Lejoyeux et al ။ , 2008; Villella et al ။ , 2011) ။ သို့သော်ရောဂါနှစ်မျိုးလုံး၏လိင်ပျံ့နှံ့မှု (CBB ရှိအမျိုးသမီးများ၏အချိုးအစားနှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုအမျိုးသားများ) တွင်သိသာသောခြားနားချက်ရှိသည်။ ဤရောဂါသည်အဘယ်ကြောင့်ဤရောဂါများအကြားတူညီမှုကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်ခဲယဉ်းကြောင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရှင်းပြနိုင်သည် (vlvarez-Moya et al ။ , 2007) ။ နောက်ဆုံးအနေနှင့်ဤအခြေအနေကိုပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းကြောင့် GD လူနာအရေအတွက်သည်ဤလေ့လာမှုတွင်လေ့လာခဲ့သောအခြားအမူအကျင့်စွဲများထက်များစွာပိုမိုမြင့်မားခဲ့သည်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများသည်ဤအားနည်းချက်ကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်ပိုမိုကြီးမား။ ကွဲပြားခြားနားသောနမူနာများကိုအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်သင့်သည်။ ရုပ်ဝါဒတန်ဖိုးများနှင့်သိုလှောင်ခြင်း၏အခန်းကဏ္ also ကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သောအကြောင်းအရာများဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များကို ၄ င်းတို့၏အကန့်အသတ်များဖြင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုအတွက်တစ်ခုတည်းယူနစ်ရှိကုသမှုခံယူရသောလူနာများ၏လက္ခဏာများသည်မူလလူ ဦး ရေတွင်စွဲလမ်းမှု၏အမှန်တကယ်ကြိမ်နှုန်းကိုရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းမရှိကြောင်းအလေးအနက်ပြောကြားခဲ့သည်။ လေ့လာမှုတွင်ဆန်းစစ်ထားသောအမူအကျင့်ဆိုင်ရာဖြည့်စွက်မှုများအတွက်အများသဘောတူညီမှုမရှိခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုယေဘူယျအားဖြင့်ကန့်သတ်ထားသည်။
ဤလေ့လာမှု၏ရလဒ်များအရ CBB သည်အပြုအမူဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုဟုယူဆသင့်ကြောင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲခြင်း၊ လောင်းကစားခြင်း၊ IGD သို့မဟုတ်အင်တာနက်စွဲခြင်းတို့ကဲ့သို့သောအလွန်အကျွံအပြုအမူများနှင့်ဆင်တူသည်။ လက်ရှိတွင် CBB ၏စတင်ခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆီသို့ ဦး တည်စေသောအခြေခံယန္တရားများကိုဖော်ပြရန်အတွက်ပေါင်းစပ်ထားသောပုံစံတစ်ခုမရရှိနိုင်ပါ။ CBB သည်ကွဲပြားခြားနားသောစိတ်ရောဂါကုသမှုကိုကိုယ်စားပြုခြင်းရှိမရှိသို့မဟုတ်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစွဲလမ်းမှုနှင့် / သို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်ထိန်းချုပ်မှုအပြုအမူများဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာများသောအခြားစိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုအဖြစ်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာသဘောပေါက်နားလည်ရန်အဓိကခြားနားသည့်အချက်များကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်ထပ်ဆင့်ပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားများလိုအပ်သည်။ အများဆုံးရှုပ်ထွေးပြီးဘက်ပေါင်းစုံ - multidimensional ဖြစ်စဉ်များနှင့်ဝသကဲ့သို့, ဒီလေ့လာမှုများကွဲပြားခြားနားသောareasရိယာများဖုံးလွှမ်းသင့်သည်: neurobiological (ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရဒေသများ, ကွန်ယက်များနှင့်အလုပ်အမှုဆောင် / သိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုအသိအမှတ်ပြုရန်), လက်တွေ့ (ပြီးပြည့်စုံသောလူနာ phenotype ၏ဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေးနှင့်ကွဲပြားဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းများ၏ခွဲခြားရန်) အခြေအနေ) နှင့်စိတ် - လူမှု - ယဉ်ကျေးမှု (ဝယ်ယူမှုအပြုအမူတိုးမြှင့်ဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြရန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များနှင့်အတူစားသုံးသူ - ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဘဏ္resourcesာရေးအရင်းအမြစ်များကိုအပြန်အလှန်ဘာကိုရှင်းလင်းဖို့) ။
နောက်ဆုံးတွင် CBB အားအသေးစိတ်နားလည်ခြင်းကကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်းလုပ်ငန်းများကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးလိမ့်မည်။ CBB ၏ etiology ကိုပိုမိုနားလည်ရန်နှင့်ပိုမိုထိရောက်သောကြား ၀ င်ဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်များကိုတည်ဆောက်ရန်ပင်ကိုယ်မူလလေ့လာမှုအသစ်များလိုအပ်သည်။
RG, FF, JM, ST နှင့် SJ တို့သည်ယခင်ရလဒ်များနှင့် AD, MB, LM, NA, NM နှင့် MG တို့၏လက်တွေ့အတွေ့အကြုံများအပေါ် အခြေခံ၍ စမ်းသပ်မှုကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။ RG, GM, TS, FF နှင့် SJ တို့သည်စမ်းသပ်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအချက်အလက်များကိုဆန်းစစ်လေ့လာပြီးလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်သည်။ SJ, TS, GM, RG နှင့် FF တို့သည်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်သည်။
ဒီလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်နှင့်သုတေသန Instituto de Salud ကားလို့စ် III ကို (FIS PI11 / 00210, FIS14 / 00290, CIBERObn, CIBERsam နှင့် Fondos FEDER) နှင့် PROMOSAM (PSI2014-56303-REDT) မှထောက်ပံ့ငွေများဖြင့်ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ CIBERObn နှင့် CIBERSAM တို့သည် ISCIII ၏အစပျိုးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤလေ့လာမှုကို FEDER ရန်ပုံငွေများ / ဥရောပဒေသဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရန်ပုံငွေ (ERDF) - ဥရောပကိုတည်ဆောက်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုနှင့် Ministerio de Economía y Competitividad ထောက်ပံ့ငွေ (PSI2015-68701-R) မှတည်ထောင်ခဲ့သည်။
Aboujaoude အီး (2014) ။ ဝယ်ယူမှုဝယ်ယူလွယ်သောရောဂါ - ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်မွမ်းမံခြင်း။ ဟား။ Pharm ။ Des ။ 20, 4021-4025 ။ 10.2174 / 13816128113199990618 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al Achab အက်စ်, Nicolier အမ်, Mauny အက်ဖ်, Monnin ဂျေ, Trojak ခ, Vandel P. ။ ။ (2011) ။ များပြားစွာအွန်လိုင်းကစားခြင်းဆိုင်ရာကစားနည်းများ - ပြင်သစ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူ ဦး ရေတွင်စွဲလမ်းသူမဟုတ်သောအွန်လိုင်းမှစုဆောင်းထားသည့်ဂိမ်းကစားသူများနှင့်စွဲလမ်းသူများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ BMC စိတ်ရောဂါကုသမှု 11: 144 ။ 10.1186 / 1471-244X-11-144 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း (1994) ။ စိတ်ရောဂါ၏ရောဂါနှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်, 4th Edn ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း။
အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း (2000) ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ၏ရောဂါနှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်, 4th Edn, စာသားတည်းဖြတ်မူ (DSM-IV-TR) ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း။
အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း (2013) ။ စိတ်ရောဂါ၏ရောဂါနှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်, 5th Edn ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း။
vlvarez-Moya EM, Jiménez-Murcia S. , Granero R. , Vallejo J. , Krug I. , Bulik CM ။ ။ (2007) ။ bulimia nervosa နှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားအတွက်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအန္တရာယ်အချက်များ၏နှိုင်းယှဉ်။ Compr ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 48, 452-457 ။ 10.1016 / j.comppsych.2007.03.008 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
အက်ရှလေ LL, Boehlke KK (2012) ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစား: အထွေထွေခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။ ဂျေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေးဝါးများ 44, 27-37 ။ 10.1080 / 02791072.2012.662078 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Baik J.-H. (2013) ။ ဆုလာဘ် -related အပြုအမူအတွက် Dopamine အချက်ပြ။ ရှေ့။ အာရုံကြောတိုက်နယ် 7: 152 ။ 10.3389 / fncir.2013.00152 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Balogh KN, Mayes LC၊ Potenza MN (2013) ။ လူငယ်များအတွက်စွန့်စားမှုနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း - စွဲလမ်းမှုအားနည်းခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်ခြင်း။ ဂျေ။ စှဲလမျးသူ။ 2, 1-9 ။ 10.1556 / JBA.2.2013.1.1 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Basu ခ, Basu အက်စ်, Basu ဂျေ (2011) ။ အတင်းအကျပ်ဝယ်ယူ: တစ်ခုသတိမမူ entity ။ ဂျေအိန္ဒိယ Med ။ Assoc ။ 109, 582-585 ။ [PubMed]
Billieux J. , Lagrange G. အ, Van der Linden အမ်, Lançon C. , Adida အမ်, Jeanningros R. (2012) ။ ကုသမှု - ရှာဖွေနေရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းတစ်နမူနာအတွက် Impulse ၏စုံစမ်းစစ်ဆေး: multidimensional ရှုထောင့်။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 198, 291-296 ။ 10.1016 / j.psychres.2012.01.001 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Black က DW, Shaw အမ်, Blum N. (2010) ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့် compulsive ဝယ်: သူတို့တစ်တွေ obsessive-compulsive ရောင်စဉ်အတွင်းကျကြဘူး? တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး Clin ။ အာရုံကြော။ 12, 175-185 ။ 10.1097 / MJT.0b013e3181ed83b0 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Black က DW, Shaw အမ်, McCormick ခ, Bayless JD, Allen ကဂျေ (2012) ။ Neuropsychological စွမ်းဆောင်ရည်, Impulse, ADHD လက္ခဏာတွေနှင့် compulsive ဝယ်ရောဂါရှာဖွေနေအသစ်အဆန်း။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 200, 581-587 ။ 10.1016 / j.psychres.2012.06.003 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Blanco C. , Potenza MN, Kim SW, Ibáñezအေ, Zaninelli R. , Saiz-Ruiz J. et al ။ ။ (2009) ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက်ထကြွလွယ်သောနှင့် compulsivity ၏ရှေ့ပြေးလေ့လာမှု။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 167, 161-168 ။ 10.1016 / j.psychres.2008.04.023 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bottesi G. အ, Ghisi အမ်, Ouimet AJ, Tira MD, Sanavio အီး (2015) ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက် compulsivity နှင့် Impulse: တစ်ရှုထောင် - transdiagnostic ချဉ်းကပ် DSM-5 ခွဲခြားလက်တွေ့ utility ကို add သနည်း? ဂျေ Gambl ။ လုံး။ 31, 825-847 ။ 10.1007 / s10899-014-9470-5 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al Choi S.-W. , Kim HS, Kim G.-Y. , Jeon Y. , Park SM, Lee J.-Y. ။ (2014) ။ အင်တာနက်ဂိမ်းကစားခြင်းရောဂါ၊ လောင်းကစားခြင်းနှင့်အရက်သုံးစွဲမှုရောဂါများတွင်တူညီမှုနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုများ - တွန်းအားပေးနိုင်စွမ်းနှင့်ဆွဲဆောင်နိုင်မှုကိုအဓိကထားသည်။ ဂျေ။ စှဲလမျးသူ။ 3, 246-253 ။ 10.1556 / JBA.3.2014.4.6 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al Claes L. , Bijttebier P. , Van Den Eynde အက်ဖ်၊ Mitchell JE, Faber R. , de Zwaan အမ်။ (2010) ။ ဝယ်ယူမှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုနှင့်ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းများ။ Pers ။ တစ် ဦး ချင်း။ ကွာ။ 49, 526-530 ။ 10.1016 / j.paid.2010.05.020 [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Clark ကအယ်လ် (2014) ။ အဆင်မပြေလောင်းကစား: အမူအကျင့်စွဲ၏ဖြစ်ပေါ်နေသောအယူအဆ။ အမ်း နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ 1327, 46-61 ။ 10.1111 / nyas.12558 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Cloninger CR (1999) ။ အဆိုပါ temperament နှင့်ဇာတ်ကောင် Inventory- ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော။ စိန့်လူးဝစ်, MO: ဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်။
Davenp သို့မဟုတ် t K. , ဟူစတန် JE, Griffiths က MD (2012) ။ အလွန်အကျွံစားသုံးခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးများအနေဖြင့်အလွန်အကျွံစားသုံးခြင်းနှင့်ဝယ်ယူခြင်းအပြုအမူများ - အကျိုးခံစားခွင့်ဆိုင်ရာခံစားမှု၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ Int ။ ဂျေ Ment ။ ကျန်းမာရေးစွဲ။ 10, 474-489 ။ 10.1007 / s11469-011-9332-7 [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Dayan J. , Bernard အေ, Olliac ခ, Mailhes AS, Kermarrec S. (2010) ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ဦး နှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၊ စွန့်စားမှုနှင့်စွဲလမ်းမှုအားနည်းခြင်း။ ဂျေ Physiol ။ ပဲရစ် 104, 279-286 ။ 10.1016 / j.jphysparis.2010.08.007 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Dell'Osso ခ, Altamura AC, Allen A. , Marazziti,, Hollander E. (2006) ။ ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်တဲ့ရောဂါတွေကိုကူးစက်ရောဂါနဲ့လက်တွေ့မွမ်းမံမှုများ - အရေးကြီးတဲ့သုံးသပ်ချက်။ အီးယူအာရ်။ Arch ။ စိတ်ရောဂါကုဆေးရုံ။ အာရုံကြော။ 256, 464-475 ။ 10.1007 / s00406-006-0668-0 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Derbyshire KL၊ Grant JE (၂၀၁၅) ။ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: စာပေ၏ပြန်လည်သုံးသပ်။ ဂျေ။ စှဲလမျးသူ။ 2015, 4-37 ။ 43 / 10.1556 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Derogatis အယ်လ် (1990) ။ SCL-90-Administration, R. , ရမှတ်နှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများလက်စွဲစာအုပ်။ Baltimore, MD: လက်တွေ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသုတေသန။
di Nicola အမ်, Tedeschi,, De Risio L. , Pettorruso အမ်, Martinotti G. အ, Ruggeri F. , et al ။ ။ (2015) ။ အရက်သေစာသောက်စားခြင်းနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများကိုပူးတွဲဖြစ်ပျက်ခြင်း - ထကြွလွယ်သောစိတ်နှင့်တပ်မက်ခြင်း၏ဆက်စပ်မှု။ မူးယစ်ဆေးအရက်ပေါ်မူတည်။ 148, 118-125 ။ 10.1016 / j.drugalcdep.2014.12.028 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Dittmar အိပ်ချ် (2005) ။ ဝယ်လိုအားဝယ် - ကြီးထွားလာစိုးရိမ်ပူပန်မှု? ကျား၊ မ၊ အသက်နှင့်ရုပ်ဝတ္ထုဆိုင်ရာတန်ဖိုးများကိုခန့်မှန်းသူများအဖြစ်အတည်ပြုခြင်း။ br ။ ဂျေ Psychol ။ 96, 467-491 ။ 10.1348 / 000712605X53533 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Echeburúaအီး (1999) ။ Adicciones Sin Drogas? ။ Las Nuevas Adicciones: Juego, Sexo, Comida, Compras, Trabajo, Internet ။ Bilbao: Desclee ကနေ Brower ။
Echeburúaအီး, Báez C. , Fernándezဂျေ, Páez D. (1994) ။ တောင်ပိုင်းသပိတ် (SOGS): validaciónespañola။ [South Oaks လောင်းကစားမျက်နှာပြင် (SOGS): စပိန်အတည်ပြုခြင်း] ။ Anális Modif ။ Cond ။ 20, 769-791 ။
အယ်လ် -Guebaly N. , ရွှံ့တီ, Zohar ဂျေ, Tavares အိပ်ချ်, Potenza MN (2012) ။ အမူအကျင့်စွဲစွဲလမ်းမှု၌စွဲစေသည့်အင်္ဂါရပ်များ - လောင်းကစားခြင်းကိစ္စ။ စွဲ 107, 1726-1734 ။ 10.1111 / j.1360-0443.2011.03546.x [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Engel အေ, Caceda R. (2015) ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းဆိုင်ရာသုတေသနသည်ဓာတုဗေဒနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများကိုပိုမိုနားလည်နိုင်ပါသလား။ ကြက်သွန်ဖြူ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုဗျာ 8, 75-85 ။ 10.2174 / 1874473708666150916113131 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Farré JM, ဖာနန်ဒက် - Aranda အက်ဖ်၊ ဂရန်ရို R. ၊ Aragay N. , Mallorquí-Bague N. , Ferrer V. , et al ။ ။ (2015) ။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်လောင်းကစားခြင်းရောဂါ - တူညီခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှု။ Compr ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 56, 59-68 ။ 10.1016 / j.comppsych.2014.10.002 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Fattore အယ်လ်, Melis အမ်, Fadda P. , Fratta ဒဗလျူ (2014) ။ စွဲရောဂါများအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု။ ရှေ့။ Neuroendocrinol ။ ၃၅: ၃ ။ 35 / j.yfrne.3 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဖာနန်ဒက် - အာရန်းအက်ဖ်၊ ဂျင်နီဒက် - မာစီယာအက်စ်၊ Alvarez-Moya EM၊ Granero R. , Vallejo J. , Bulik CM (2006) ။ အစားအစာမမှန်မှုအတွက် Impulse Control Disorders: လက်တွေ့နှင့်ကုထုံးဆိုင်ရာဂယက်ရိုက်ခြင်း။ Compr ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 47, 482-488 ။ 10.1016 / j.comppsych.2006.03.002 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဖာနန်ဒက် - အာရန်းအက်ဖ်၊ Pinheiro AP၊ Thornton LM, Berrettini WH, Crow S. , Fichter MM ။ ။ (2008) ။ အစာစားခြင်းမမှန်သည့်အမျိုးသမီးများ Impulse Control Disorders ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 157, 147-157 ။ 10.1016 / j.psychres.2007.02.011 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Fineberg NA, Potenza MN, Chamberlain SR၊ ဘာလင် HA၊ Menzies L. , Bechara အေ။ ။ (2010) ။ တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များမှ endophenotypes အထိ compulsive and impulsive အပြုအမူများကိုစုံစမ်းခြင်း - ဇာတ်ကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ်ချက်။ Neuropsychopharmacology 35, 591-604 ။ 10.1038 / npp.2009.185 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ပထမ ဦး စွာအမ်, မျောက်လွှဲကျော်အမ်, Spitzer R. , Williams ကဂျေ (1996) ။ DSM IV Axis I Disorders-Research Version (SCID-I, version 2.0) အတွက်ဖွဲ့စည်းထားသောလက်တွေ့အင်တာဗျူးအတွက်အသုံးပြုသူများလမ်းညွှန်။ နယူးယောက်၊ နယူးယောက် - နယူးယောက်ပြည်နယ်စိတ်ရောဂါကုသမှုဌာန။
Franken IHA, Muris P. , Georgieva ဗြဲ (၂၀၀၆) ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်စွဲ၏ Grey ကရဲ့မော်ဒယ်။ စှဲလမျးသူ။ Behav ။ 2006, 31-399 ။ 403 / j.addbeh.10.1016 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Frost က RO, Steketee G. အ, Williams ကအယ်လ် (2002) ။ အတင်းအကျပ်ဝယ်ယူမှု, compulsive သိုလှောင်နှင့် obsessive-compulsive ရောဂါ။ Behav ။ Ther ။ 33, 201-214 ။ 10.1016 / S0005-7894 (02) 80025-9 [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Grant JE, Chamberlain SR (2014) ။ ပစ္စည်းနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများကိုဖြတ်တောက်သောဒေါသတကြီးလုပ်ရပ်နှင့်ထကြွလွယ်သောရွေးချယ်မှု။ စှဲလမျးသူ။ Behav ။ 39, 1632-1639 ။ 10.1016 / j.addbeh.2014.04.022 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Grant JE, Schreiber LRN, Odlaug BL (2013) ။ Phenomenology နှင့်အပြုအမူစွဲ၏ကုသမှု။ လုပ်နိုင် ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု 58, 252-259 ။ [PubMed]
Griffiths က MD, Hunt က N. (1995) ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင်ကွန်ပျူတာဂိမ်းကစားခြင်း - ပျံ့နှံ့မှုနှင့်လူ ဦး ရေဆိုင်ရာအညွှန်းကိန်းများ။ ဂျေလူထုအသုံးချမှု။ Soc ။ စိတ်ရောဂါ။ 5, 189-193 ။ 10.1002 / casp.2450050307 [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Griffiths က MD, Hunt က N. (1998) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကွန်ပျူတာဂိမ်းများအပေါ်မှီခိုမှု။ စိတ်ရောဂါ။ ကိုယ်စားလှယ်။ 82, 475-480 ။ 10.2466 / pr0.1998.82.2.475 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Griffiths က MD, Meredith အေ (2009) ။ ဗီဒီယိုဂိမ်းနှင့်၎င်း၏ကုသမှု။ ဂျေ Contemp ။ စိတ်ရောဂါ။ 39, 247-253 ။ 10.1007 / s10879-009-9118-4 [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Gutiérrez-Zotes ဂျေအေ၊ ဘေယွန်စီ၊ မွန်ဆာရတ်ဂျေ၊ Valero ဂျေ၊ လာဘတ်အေ၊ Cloninger CR ။ (2004) ။ Inventario del Temperamento y el Carácter-Revisado (TCI-R) ။ အထွေထွေအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်။ Actas Españolas Psiquiatr ။ 32, 8-15 ။ [PubMed]
Hartston အိပ်ချ် (2012) ။ တစ် ဦး စွဲအဖြစ် compulsive စျေးဝယ်များအတွက်ကိစ္စ။ ဂျေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေးဝါးများ 44, 64-67 ။ 10.1080 / 02791072.2012.660110 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Janiri အယ်လ်, Martinotti G. အ, Dario တီ, Schifano အက်ဖ်, Bria P. (2007) ။ လောင်းကစားသမားများ၏စိတ်ထားနှင့်အက္ခရာစာရင်း (ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုယ်ရေးအချက်အလက်) ။ Subst ။ အလွဲသုံးစားမှု 42, 975-984 ကိုသုံးပါ။ 10.1080 / 10826080701202445 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Jiménez-Murcia အက်စ်၊ Aymamí-Sanromàအမ်၊ ဂိုမာ - ပန်ယာအမ်၊ vlvarez-Moya E. , Vallejo J. (2006) ။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရအသိအမှတ်ပြုအသိအမှတ်ပြုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ ဘာစီလိုနာ - ဆေးရုံ Universitari က de Bellvitge, ဌာနခွဲက Salut, Generalitat de Catalunya ။
Jiménez-Murcia အက်စ်၊ ဖာနန်ဒက်ဇ်အာဒါအက်ဖ်၊ ဂရန်ရို R. ၊ ခိုးလစ်အမ်၊ လာဗားဒါအမ်၊ ။ (2014a) ။ လောင်းကစားရောဂါတွင်ဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲခြင်း - လက်တွေ့၊ စိတ်ပညာနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဆက်စပ်မှုများ။ Biomed Res ။ Int ။ 2014 ခုနှစ်, 315062. 10.1155 / 2014/315062 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Jiménez-Murcia S. , Fernández-Aranda အက်ဖ်၊ ဂရန်ရို R. ၊ Menchón JM (2014b) ။ စပိန်နိုင်ငံတွင်လောင်းကစားခြင်း။ စွဲ 109, 1595-1601 ။ 10.1111 / add.12232 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Jiménez-Murcia S. , Fernández-Aranda အက်ဖ်၊ Kalapanidas အီး, Konstantas D. , Ganchev တီ, Kocsis O. , et al ။ ။ (2009) ။ Playmancer စီမံကိန်း - စားနပ်ရိက္ခာနှင့်ထိန်းချုပ်မှုရောဂါများအတွက်နောက်ထပ်ကုထုံးကိရိယာတစ်ခုအနေဖြင့်လေးနက်သောဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်း။ လုံး။ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာနည်းပညာ အကြောင်းကြားပါ 144, 163-166 ။ 10.3233 / 978-1-60750-017-9-16 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Jiménez-Murcia အက်စ်, Granero R. , Moragas L. , Steiger အိပ်ချ်, အစ္စရေးအမ်, Aymamí N. , et al ။ ။ (2015) ။ bulimia nervosa၊ အတင်းအကျပ်ဝယ်ယူခြင်းနှင့်လောင်းကစားဆိုင်ရာရောဂါများအကြားခြားနားချက်များနှင့်တူညီသည်။ အီးယူအာရ်။ စားသည်။ ဖျက်သိမ်းသည်။ ဗျာ 23, 111-118 ။ 10.1002 / erv.2340 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Karim R. , Chaudhri P. (2012) ။ အမူအကျင့်စွဲ: ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။ ဂျေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေးဝါးများ 44, 5-17 ။ 10.1080 / 02791072.2012.662859 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kellett အက်စ်, ဘောလ်တန် JV (2009) ။ compulsive ဝယ်ယူမှု: တစ်သိမြင်မှု - အမူအကျင့်မော်ဒယ်။ Clin ။ စိတ်ရောဂါ။ စိတ်ရောဂါ။ 16, 83-99 ။ 10.1002 / cpp.585 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Konkolý Thege ခ၊ Woodin EM, Hodgins DC ဝီလျံ RJ (2015) ။ အပြုအမူစွဲလမ်းမှု၏သဘာဝသင်တန်း။ ၅ နှစ်တာလေ့လာမှု။ BMC စိတ်ရောဂါကုသမှု 5: 15 ။4/ s10.1186-12888-015-0383 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Leeman RF, Potenza MN (2013) ။ neurobiology နှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှု၏မျိုးရိုးဗီဇကိုတိကျစွာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - ထွန်းသစ်စသုတေသနနယ်ပယ်။ လုပ်နိုင် ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 58, 260-273 ။ 10.1016 / j.biotechadv.2011.08.021 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lejoyeux အမ်, Avril အမ်, Richoux C. , Embouazza အိပ်ချ်, Nivoli အက်ဖ် (2008) ။ လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုအပေါ်မှီခိုမှုနှင့် Parisian fitness ခန်း၏ဖောက်သည်များအကြားအခြားအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုပျံ့နှံ့ခြင်း။ Compr ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 49, 353-358 ။ 10.1016 / j.comppsych.2007.12.005 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lejoyeux အမ်, Weinstein အေ (2010) ။ compulsive ဝယ်ယူမှု။ နံနက်။ ဂျေမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု 36, 248-253 ။ 10.3109 / 00952990.2010.493590 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lesieur HR, Blume SB (1987) ။ South Oaks လောင်းကစားမျက်နှာပြင် (SOGS) - ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားများကိုဖော်ထုတ်ရန်ကိရိယာအသစ်။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု 144, 1184-1188 ။ 10.1176 / ajp.144.9.1184 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lorains FK, Stout JC, Bradshaw JL, Dowling NA, Enticott PG (2014) ။ ပြreportedနာရှိသည့်လောင်းကစားသမားများထံမှကိုယ်တိုင်တင်ပြသည့်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်တားစီးမှုထိန်းချုပ်မှု။ ဂျေ Clin ။ Exp ။ Neuropsychol ။ 36, 144-157 ။ 10.1080 / 13803395.2013.873773 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Maraz အေ, Griffiths က MD, Demetrovics Z. (2015) ။ compulsive ဝယ်ယူမှု၏ပျံ့နှံ့: meta-analysis သည်။ စွဲ။ 111, 408-419 ။ 10.1111 / add.13223 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Martínez-Azumendi O. , Fernández-Gómez C. , Beitia-Fernández M. (2001) ။ [စပိန်ပြင်ပလူနာစိတ်ရောဂါဆိုင်ရာနမူနာ SCL-90-R ၏အချက်အလက်များကွဲလွဲမှု] ။ Actas Españolas Psiquiatr ။ 29, 95-102 ။ [PubMed]
McElroy SL၊ Keck PE၊ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး HG၊ Smith JM, Strakowski SM (1994) ။ အတင်းအကျပ်ဝယ်ယူမှု: အမှု 20 ၏အစီရင်ခံစာ။ ဂျေ Clin ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 55, 242-248 ။ [PubMed]
McQueen က P. , မှို R. , Kyrios အမ် (2014) ။ ဝယ်ယူမှုအပေါ်သိမှတ်ခံစားမှု၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများအတွက်စမ်းသပ်သက်သေအထောက်အထား။ ဂျေ။ Ther ။ Exp ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 45, 496-501 ။ 10.1016 / j.jbtep.2014.07.003 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Mueller အေ, Mitchell က je, Crosby RD, Gefeller O. , Faber RJ, မာတင်အေ, et al ။ ။ (2010) ။ ဂျာမနီ၌ compulsive ဝယ်ယူမှု၏ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့် sociodemographic ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေနှင့်အတူ၎င်း၏အသင်းအဖွဲ့။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 180, 137-142 ။ 10.1016 / j.psychres.2009.12.001 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al Müllerအေ, Claes L. , Georgiadou အီး၊ Möllenkampအမ်၊ Voth EM, Faber RJ ။ ။ (2014) ။ စိတ် ၀ င်စားခြင်းဝယ်ယူခြင်းသည်ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ထားနှင့်ဆက်နွယ်မှုရှိပါသလား။ CB ရှိဆေးကုသမှုခံယူသောလူနာနမူနာမှတွေ့ရှိချက်များ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 216, 103-107 ။ 10.1016 / j.psychres.2014.01.012 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Muller အေ, Loeber အက်စ်, Söchtigဂျေ, Te Wildt ခ, De Zwaan အမ် (2015a) ။ လေ့ကျင့်ခန်းအပေါ်မှီခိုခြင်း၊ အစာစားခြင်းရောဂါရောဂါဗေဒ၊ အရက်သောက်ခြင်းရောဂါနှင့်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများကိုကျန်းမာရေးစင်တာများ၏ဖောက်သည်များအကြားအန္တရာယ်ရှိသည်။ ဂျေ။ စှဲလမျးသူ။ 4, 273-280 ။ 10.1556 / 2006.4.2015.044 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Müller A. , Mitchell JE, de Zwaan M. (2015b) compulsive ဝယ်ယူမှု။ နံနက်။ ဂျေစွဲ။ 24, 132-137 ။ 10.1111 / ajad.12111 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Munno D. , Saroldi အမ်, Bechon အီး, Sterpone SCM, Zullo G. အ (2015) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများနှင့်စရိုက်လက္ခဏာများ။ CNS Spectr ။ 13, 1-7 ။ 10.1017 / S1092852915000474 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Otero-López JM, Villardefrancos အီး (၂၀၁၄) ။ ပျံ့နှံ့ကူးစက်မှု၊ လူမှုစီးပွားရေးအချက်များ၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှုနှင့် ၀ ယ်ယူခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်နည်းနာများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းဆိုင်ရာနည်းဗျူဟာများ - စပိန်နိုင်ငံ၊ ဂလီစီယာတွင်ကဏ္sectionအလိုက်လေ့လာမှု။ BMC စိတ်ရောဂါကုသမှု 2014: 14 ။ 101 / 10.1186-1471X-244-14 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Piquet-Pessôaအမ်, Ferreira GM က, Melca IA, Fontenelle LF (2014) ။ DSM-5 နှင့်လိင်, စျေးဝယ်သို့မဟုတ်စှဲအဖြစ်ခိုးယူပါဝင်သည်ဖို့မဆုံးဖြတ်။ Curr ။ စှဲလမျးသူ။ rep ။ 1, 172-176 ။ 10.1007 / s40429-014-0027-6 [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Potenza MN (2014) ။ DSM-5 များ၏အခြေအနေတွင် non-ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းအပြုအမူတွေ။ စှဲလမျးသူ။ ပြုမူနေ။ 39, 1-2 ။ 10.1016 / j.addbeh.2013.09.004 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Probst CC, ဗန် Eimeren တီ (2013) ။ ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မှုရောဂါ၏အလုပ်လုပ်တဲ့ခန္ဓာဗေဒ။ ဟား။ Neurol ။ အာရုံကြော။ ကိုယ်စားလှယ်။ 13, 386. 10.1007 / s11910-013-0386-8 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Raab G. အ၊ Elger စီအီး၊ Neuner အမ်၊ Weber B. (၂၀၁၁) ။ compulsive ဝယ်အပြုအမူတစ်ခုအာရုံကြောလေ့လာမှု။ ဂျေ Consum ။ ပေါ်လစီ 2011, 34-401 ။ 413 / s10.1007-10603-011-9168 [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Reinert DF၊ Allen JP (2002) ။ အရက်အသုံးပြုမှုမမှန်စစ်ဆေးခြင်းစစ်ဆေးခြင်း (AUDIT) - မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောသုတေသနကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ အရက်။ Clin ။ Exp ။ Res ။ 26, 272-279 ။ 10.1111 / j.1530-0277.2002.tb02534.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Robbins TW, Clark ကအယ်လ် (2015) ။ အမူအကျင့်စွဲ။ ဟား။ ထင်မြင်ချက်။ Neurobiol ။ 30, 66-72 ။ 10.1016 / j.conb.2014.09.005 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ရောဘတ်ဂျေအေ, Manolis C. , Pullig C. (2014) ။ ကဆက်ပြောသည် Self- လေးစားမှု, Self- တင်ဆက်မှုစိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့် compulsive ဝယ်ယူမှု။ စိတ်ရောဂါ။ မာကု 31, 147-160 ။ 10.1002 / mar.20683 [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
နှင်းဆီ P. , Segrist DJ သမား (2014) ။ အနှုတ်လက္ခဏာနှင့်အပြုသဘောဆောင်အရေးတကြီးနှစ် ဦး စလုံး compulsive ဝယ်ဘို့အန္တရာယ်အချက်များဖြစ်နိုင်သည်။ ဂျေ။ စှဲလမျးသူ။ 3, 128-132 ။ 10.1556 / JBA.3.2014.011 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Saunders JB, Aasland OG, Babor TF, de la Fuente JR, Grant M. (1993) ။ အရက်သုံးစွဲမှုရောဂါများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းစစ်ဆေးခြင်း (AUDIT) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု - အန္တရာယ်ရှိသောအရက်သုံးစွဲသူများကိုစောစောစီးစီးရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းဆိုင်ရာပူးပေါင်းစီမံကိန်း - ၂ ။ စွဲ 88, 791-804 ။ 10.1111 / j.1360-0443.1993.tb02093.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Stinchfield R. (2003) ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဘို့ DSM-IV ရောဂါရှာဖွေစံ၏အတိုင်းအတာ၏ယုံကြည်စိတ်ချရ, တရားဝင်မှုနှင့်ခွဲခြားတိကျမှန်ကန်မှု။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု 160, 180-182 ။ 10.1176 / appi.ajp.160.1.180 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Suissa AJ (2015) ။ ဆိုက်ဘာစွဲ - စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုရေးရှုထောင့်ဆီသို့။ စှဲလမျးသူ။ Behav ။ 43, 28-32 ။ 10.1016 / j.addbeh.2014.09.020 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Tárregaအက်စ်၊ ကက်စထရို-ကာရာရေ့စ်အယ်လ်၊ ဖာနန်ဒက်ဇ်အာဒါအက်ဖ်၊ ဂရိုရို R. ၊ Giner-Bartolomé C. , Aymamí N. , et al ။ ။ (2015) ။ ပြင်းထန်သောလောင်းကစားခြင်းရောဂါအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ခြင်းကိုလေ့ကျင့်ရန်အတွက်နောက်ထပ်ကုထုံးတစ်ခုအနေဖြင့်လေးနက်သောဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခု။ ရှေ့။ စိတ်ရောဂါ။ ၆: ၁၇၂၁ ။6/ fpsyg.1721 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Tavares အိပ်ချ်, Lobo DSS, Fuentes,, Black က DW (2008) ။ [အတင်းအကျပ်ဝယ်ယူမှုရောဂါ: ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်တစ် ဦး အမှု Vignette] ။ ဗြ Bras ။ Psiquiatr ။ 30 (Suppl ။ 1) S16-S23 ။ 10.1590 / S1516-44462008005000002 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Trotzke P. , Starcke K. , Müllerအေ, အမှတ်တံဆိပ်အမ် (2015) ။ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု၏တိကျသောပုံစံတစ်ခုအဖြစ်အွန်လိုင်းရောဂါဗေဒကိုဝယ်ယူခြင်း - ပုံစံကိုအခြေခံသည့်စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု။ PLoS ONE 10: e0140296 ။ 10.1371 / journal.pone.0140296 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Unger အေ, Papastamatelou ဂျေ, Yolbulan Okan အီး, Aytas အက်စ် (2014) ။ စီးပွားရေးအခြေအနေသည်အလယ်အလတ်တန်းစားကျောင်းသားများ၏ ၀ ယ်ယူမှုအပေါ် ၀ င်ငွေရှိခြင်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုမည်သို့အလယ်အလတ်ခွဲခြားသည် - တူရကီနှင့်ဂရိတို့အကြားနှိုင်းယှဉ်လေ့လာချက်။ ဂျေ။ စှဲလမျးသူ။ 3, 173-181 ။ 10.1556 / JBA.3.2014.018 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Vanderah တီ, Sandweiss အေ (2015) ။ စွဲအတွက် neurokinin receptors ၏ဆေးဝါးဗေဒ: ကုထုံးများအတွက်အလားအလာ။ Subst ။ အလွဲသုံးစားမှု Rehabil ။ 6, 93-102 ။ 10.2147 / SAR.S70350 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Villella C. , Martinotti G. အ၊ Di Nicola အမ်၊ Cassano အမ်၊ La Torre G. , Gliubizzi MD ။ ။ (2011) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးများတွင်အမူအကျင့်စွဲခြင်း - ပျံ့နှံ့မှုလေ့လာမှုမှရလာဒ်များ။ ဂျေ Gambl ။ လုံး။ 27, 203-214 ။ 10.1007 / s10899-010-9206-0 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Weinstein အေ, Mezig အိပ်ချ်, Mizrachi အက်စ်, Lejoyeux အမ် (2015) ။ အင်တာနက်ဝယ်ယူသူများအကြားမတန်တဆဝယ်ယူခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအတိုင်းအတာများနှင့်စွဲမက်စွဲမက်ဖွယ်အပြုအမူများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်လေ့လာမှုတစ်ခု။ Compr ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 57, 46-50 ။ 10.1016 / j.comppsych.2014.11.003 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Williams အေဒီ, Grisham JR (2012) ။ လှုံ့ဆော်မှု, စိတ်ခံစားမှုစည်းမျဉ်းများနှင့် compulsive ဝယ်အတွက်သတိအာရုံကိုအာရုံစူးစိုက်။ Cogn ။ Ther ။ Res ။ 36, 451-457 ။ 10.1007 / s10608-011-9384-9 [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]